खै त पत्रकार महासंघमा समावेशीता? |
खै त पत्रकार महासंघमा समावेशीता?
प्रकाशित मिति :2017-08-20 10:32:13
योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै किन पत्रकार महिलाहरु नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिन सकिरहेका छैन त ? यो सोच्नुपर्ने विषय हो । अग्रज पत्रकार महिलाहरु उम्मेदवारको टिकट पाउन ठूलै पापट बेल्नुपर्ने अनुभव सुनाउँछन् । त्यो त पुरुषहरुले पनि सुनाएकै हुन् । उम्मेदवार बनेका अधिकांशले पत्याएर टिकट पाए, अब जिताउन पनि सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर भोट मागिरहेका छन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ उम्मेदवार बन्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ ।
राज्यको चौथो अंगको रुपमा मानी आएको नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघको २५ औं अधिवेशन आजदेखि (भदौं ४ र ५) काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।
नयाँ नेतृत्व चुन्नका लागि देशभरका पत्रकारहरु काठमाडौंमा आइसकेका छन् । नेतृत्वका लागि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्ने र विभिन्न जातिय समुदायमा आवद्ध पत्रकारहरुबीचको गठबन्धनबाट ३ जना पत्रकारले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
यति मात्र हैन, उपाध्यक्ष, महासचिव, काेषाध्यक्ष तथा लेखा समितिको संयोजक जस्ता कार्यकारी पदमा समेत एक जना महिलाको उम्मेदवारी छैन, एक जनाले पनि टिकट पाएनन् ।
महासंघको ४७ सदस्यीय कार्यसमिति र ३ सदट्ठयीय लेखा समितिमा आरक्षण छुट्याइएको महिला सचिव र महिला सदस्यमा बाहेक अन्य पदमा करिब शुन्य जस्तै उम्मेदवारी परेको छ । महिलालाई छुट्याएकै पदमा मात्र महिला/महिला भिड्दैछन् । अघिल्लो कार्यकालको उपाध्यक्षमा हालका सुचना आयुक्त यशोदा तिम्सिना निर्वाचित भएकी थिइन् । अहिलेको कार्यसमितिमा पनि समावेशी उपाध्यक्षमा अनिता विन्दु उपाध्यक्ष छन् । तर अबको कार्यसमितिको कार्यकारी पदमा एक जना पनि महिला हुनेछैन । सचिव नै चार जना रहने वैधानिक व्यवस्था भएकाले महिला सचिवको पनि खासै भूमिका हुने देखिँदैन ।
विगतमा विजयी नभएपनि कार्यकारी पद र खुल्लामा महिलाहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । तर यसपटक निकै कमले मात्रै आँट गरेका छन् । आकांक्षीहरुकै भाषामा भन्नुपर्दा महिलालाई नेतृत्वले पत्याएनन् ।
अखिर किन त ? हुन त प्रत्युत्तरमा भन्ने गर्छन्, महिलालाई उठ्न कसले रोकेको छ र ? पुरुष मात्रै उठ्ने कोटा त भनिएको छैन । तर योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै किन पत्रकार महिलाहरु नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिन सकिरहेका छैन त ? यो सोच्नुपर्ने विषय हो । अग्रज पत्रकार महिलाहरु उम्मेदवारको टिकट पाउन ठूलै पापट बेल्नुपर्ने अनुभव सुनाउँछन् । त्यो त पुरुषहरुले पनि सुनाएकै हुन् । उम्मेदवार बनेका अधिकांशले पत्याएर टिकट पाए, अब जिताउन पनि सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर भोट मागिरहेका छन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ उम्मेदवार बन्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ ।
हो, समान र सक्रिय सहभागिताका लागि महिलाले अवसरसगै योग्यता र क्षमता बढाउनुपर्छ । तर जबसम्म महिलालाई हेर्ने पुरुष दृष्टीकोणमा सकरात्मक परिवर्तन हुदैन तबसम्म महिला खुलेर बाहिर आउन सक्दैनन् ।
सञ्चार सामाजिक रूपान्तरणको अन्तिम लक्ष्य लिएका संस्था हुन्, जोे समावेशी प्रजातन्त्र र समावेशी विकासलार्ई सवल बनाउने महत्वपूर्ण साधन हुन् । त्यसैले पनि महासंघ आफैमा उदाहरण बन्नुपर्दछ ।